Netflix တွင်အကောင်းဆုံးရပ်တည်မှု ၅၀ - အန်သိုနီဂျေဆယ်လ်nik - စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများနှင့်ဆုတောင်းချက်များ - Netflix ရုပ်ရှင်
Netflix ၏ပထမဆုံးမူရင်းရုပ်ရှင် Beasts of No Nation သည်ယခု Netflix တွင်ရှိသည်! Netflix ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အသစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၆ မှ ၁၈ ရက် - No Nation Beasts of Anthony Jeselnik Netflix ရုပ်ရှင် က ပက်ထရစ် Schmidt က လွန်ခဲ့သော5နှစ်က @PatrickASchmidt ကိုလိုက်နာပါ
Netflix အပေါ်အကောင်းဆုံး 50-Stand-up ဟာသအထူး၏ယခုအပတ်ရဲ့ updated အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ထို့အပြင်ကြည့်ရှုသည် အန်သိုနီ Jeselnik: အတွေးများနှင့်ဆုတောင်းချက်များ ။ သူ၏ပထမဆုံး Netflix မူရင်းသည်မည်မျှမြင့်မားသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။
အန်သိုနီ Jeselnik ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး Netflix ကအထူး အတွေးများနှင့်ဆုတောင်းချက်များ သင်ရရှိနေပြီဖြစ်ပြီးသင်မှောင်မိုက်သောဟာသဇာတ်ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်၏စာရင်းထဲသို့ချက်ချင်းထည့်သွင်းသင့်သည်။
Jeselnik ရဲ့ ဟာသဗဟိုလက်ဆောင်များ stand-up အထူးကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ပြသခဲ့သည်။ သူသည်ယနေ့အလုပ်လုပ်သောနောက်ရုပ်ပြကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။
သူသည်စာရေးဆရာအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အနားယူခဲ့သည် Jimmy Fallon နှင့်အတူယနေ့ညပြရန် ဒါပေမယ့်သူ၏ဟာသရုံကျယ်ပြန့် - အထိပရိသတ်ကိုမှအယူခံခဲ့သူ Fallon များအတွက်နိုင်ငံရေးအရအလုံအလောက်နှင့်ဝေးလွန်းမှောင်မိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အကြိမ်ကြိမ်ပြက်လုံးရိုက်ပြီးသည့်နောက်သူသည်သူ၏အယ်လ်ဘမ်တွင် debut album ကိုလုပ်ကိုင်ရန်ပြသခဲ့သည် ရှိတ်စပီးယား ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Comedy Central တွင်မီးကင်ရန်အတွက်ရေးသားခဲ့သည်။
စာရေးဆရာအဖြစ် Jeselnik ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်သည်ဒါဝိဒ်သည် Hasselhoff ကင်၏ကြီးနှင့်သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည် Donald Trump ၏ကင်မှာရောက်လေ၏။ ဤသည်မှာသူ၏အောင်မြင်မှုအခိုက်အတန့် ဖြစ်၍ သူ့ကိုအမျိုးသားရေဒါတွင်ထားခဲ့သည်။ သူဟာကလပ်အသင်းတွေမှာခေါင်းစီးနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူး၊ ရွက်ပေါက်နေတဲ့ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်ပြီးအခြားမှတ်သားလောက်ဖွယ်ရုပ်ပြများထံမှပြပွဲကိုခိုးယူလိုက်သည်။
သူသည်နောက်ပိုင်းတွင်ချာလီ Sheen နှင့် Roseanne Barr တို့၏ဖျော်ဖြေမှုများတွင်ဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကင်များပြီးနောက် Jeselnik သည်သူ၏ပထမဆုံးအထူးထူးခြားမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ အန်သိုနီ Jeselnik: Caligula, နောက်ပိုင်းတွင်ဟာသဗဟိုတွင်သူ့ကိုယ်ပိုင်စီးရီးကိုခေါ်ခဲ့သည် အဆိုပါ Jeselnik ထိုးစစ် 2013 ခုနှစ်တွင် 18 ဖြစ်စဉ်များကြာရှည်လိမ့်မယ်။
သူသည်အမေရိကရှိနိုင်ငံရေးအရမှန်ကန်သောအနည်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သူ၏နောက်ဆုံးပေါ်အထူးကိုအမေရိကန်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်နိုင်ငံရေးအရမှန်ကန်သောမြို့တော်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသောမြို့တွင်ပြုလုပ်ရန်သာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ အတွေးများနှင့်ဆုတောင်းချက်များသည်သမိုင်းဝင် Fillmore ပြဇာတ်ရုံတွင်ရိုက်ကူးထားသောကြောင့်သင်တစ်နာရီလုံးလုံးရယ်မောပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့တနင်္ဂနွေထိုးစစ်, မှောင်မိုက်ညစ်ညမ်းသော, လိမ္မာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော nightcap ပါပဲ။
သင်၏အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိုးဆွရန်ယခုလအစောပိုင်းက Netflix ကထုတ်ပြန်ခဲ့သောကလစ်များတွင်အထူးများအတွက်နောက်တွဲယာဉ်ကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်။
သင်ဟာ Jeselnik ရဲ့ပရိသတ်မဟုတ်ပေမယ့်ဟာသကိုချစ်မြတ်နိုးပါက Netflix ရဲ့အကောင်းဆုံးရပ်တည်တဲ့ဟာသအထူး ၅၀ ရဲ့ကျန်အဆင့်ကိုစစ်ဆေးပါ။
သငျသညျနေဆဲ Netflix ကအပေါ်စောင့်ကြည့်ဖို့တစ်ခုခုရှာနေလျှင်, ပိုပြီးကြီးမြတ်ရွေးစရာဘို့ငါတို့အခြား 50 အကောင်းဆုံး Netflix ကအဆင့်တွင်ထွက်စစ်ဆေး!
နောက်တစ်ခု:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ နောက်တစ်ခု:Netflix အပေါ်အကောင်းဆုံးဟာသ နောက်တစ်ခု:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးပြသပွဲ ၅၀
အဆိုပါလမ်းလျှောက်သေပြီရာသီ4Hulu ကိုကွောကျရှံ့
30 Trojan စစ်ပွဲနာရီ 30 30
rakudai kishi အဘယ်သူမျှမမြင်းစီးသူရဲရာသီ2လွှတ်ပေးရန်
ဘယ်အချိန်မှာ starwars netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
netflix အပေါ် fosters ၏ရာသီသစ်